Mpamatsy ny vokatra mekanika manerantany & solifara
Milina lamba milelaka
Efijery Console (6.2-10.1 mirefy)
ShangHai Harmonic Machinery Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Tanànan'i Yuqi, avaratra andrefan'ny "Voahangy Taihu Lake" tsara tarehy, 600 metatra miala ny fivoahan'ny Yuqi amin'ny làlana No.9 amin'ny làlana G42 Huning Expressway. Ny orinasa dia naorina tamin'ny Mey 2012 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra anarana 60 tapitrisa yuan ary faritra mihoatra ny 10000 metatra toradroa.
Innovation mahaleo tena sy serivisy fanavaozana
Ny orinasa dia manaraka hatrany ny foto-kevitry ny "fanavaozana tsy miankina sy ny serivisy fanavaozana" hanomezana ny mpampiasa ny volany avo lenta ..
Baiko lehibe any ivelany no nanao sonia indray! Hy ...
HENGYITONG MACHINERY dia Sinoa mitarika R & D, famokarana sy fivarotana vokatra azo avy amin'ny famindrana. Anisan'izany ny reducter an'ny planeta avo lenta, ny reducant harmonika, ny plateforme mihodina, ny automotive tran ...
Rehefa voafehy ny fihanaky ny virus virus corona COVID-19 dia haorina indray ny rafi-pitaterana lozisialy manerantany, ny indostrian'ny lozisialy mahay manohana ny haitao avo lenta toa ny 5G, ny faharanitan-tsaina artifisialy ary ny angona lehibe ...